'New Year, New #FentyBeauty' လို့ဆိုလိုက်တဲ့ RiRi ရဲ့ Fenty Beauty Concealer အသစ် | CosmeticMyanmar
Home » Article » ‘New Year, New #FentyBeauty’ လို့ဆိုလိုက်တဲ့ RiRi ရဲ့ Fenty Beauty Concealer အသစ်
‘New Year, New #FentyBeauty’ လို့ဆိုလိုက်တဲ့ RiRi ရဲ့ Fenty Beauty Concealer အသစ်
ဟေ့ အချောလေးတို့! ရုံးပိတ်ရက်၊ကျောင်းပိတ်ရက်တွေကုန်သွားလို့ စိတ်ညစ်နေကြပြီလား? ပြီးတော့ ပိတ်ရက်မှာ ခရီးသွားထား၊ Rave ထားလို့ အသားအရေတွေမညီမညာဖြစ်ပြီး ဝက်ခြံတွေ နေလောင်ကွက်တွေရှိနေလို့ရော စိတ်ရှုပ်နေရပြီလား? ဒါဆိုရင်တော့ ‘New Year, New Makeup Item’ လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။
ဒီ item လေးကတော့ RiRi လို့ခေါ်ကြတဲ့ နာမည်ကျော် Pop Star Rihanna ရဲ့ Fenty Beauty ကနေအသစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ Pro Filt’r Instant Retouch Concealer ပါ။ Fenty Beauty ရဲ့နှစ်သစ်ခြေလှမ်းအနေနဲ့ ဒီ concealer ကို နှစ်သစ် January ၁ရက်နေ့မှာပဲ Rihanna ကိုယ်တိုင် Fenty Beauty Instagram ကနေမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာပါ။ အဲဒီ video ထဲမှာ RiRi က ‘နှစ်သစ်ကူးညမှာ ကဲထားလို့ မလှမပဖြစ်နေမှာကိုသိလို့ ဖြေဆေးလာပေးတာ’ လို့ သူ့ပရိသတ်တွေကို နောက်ထားပါသေးတယ်။ နောက်ထပ် Youtube ကနေတင်တဲ့ video မှာတော့ သူရဲ့ concealer လိမ်းပုံလိမ်းနည်းကိုပါ ပြထားတာမို့ RiRi လိုလှချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ကြည့်သင့်တဲ့ video တစ်ခုပါ။
ဒီ concealer ကို အရောင် ၅၀ တောင်ထုတ်ထားတာမို့ ဘယ်အသားအရေအရောင်မဆို သုံးဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ အရောင်တွေကို Light, Medium, Tan, Deep ဆိုပြီးအရောင်အုပ်စု ၄ခုခွဲထားပြီး အသားအဖြူဆုံးကနေ အညိုဆုံးအထိ အနုကနေအရင့်စီထားပေးတာပါ။
ဒီ concealer လိမ်းက လိမ်းပြီးသွားရင် ခြောက်သွေ့သွားတာနဲ့ matte လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ setting powder လေးအုပ်လိုက်ပြီးရင်လည်း တွန့်တာ၊အရေးအကြောင်းတင်တာတွေမဖြစ်စေပါဘူးတဲ့။
အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ Fenty Beauty Pro Filt’r Instant Retouch Concealer လေးတွေကို January ၁၁ရက်နေ့က စပြီး Fenty Beauty website နဲ့ Sephora တို့မှာ တစ်ခုကို $26 ကျပ်နဲ့ရောင်းချတော့မယ်လို့လည်းသတင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။
photo references : www.fentybeauty.com
Tags: fentybeautyPro Filt'r Instant Retouch Concealer